बेलायतका यी व्यक्ति कुनै बेला एयरपोर्टमा क्लिनरको काम गर्थे तर अहिले एयरलाइन्सका मालिक Kasthamandap Daily
बेलायतका यी व्यक्ति कुनै बेला एयरपोर्टमा क्लिनरको काम गर्थे तर अहिले एयरलाइन्सका मालिक
एजेन्सी, जेठ ३१ । बेलायतका एक व्यक्तिले सफलताको नयाँ इतिहास लेखेका छन् । कुनै बेला एयरपोर्टमा सरसफाइको काम गर्ने यी व्यक्तिले आफ्नो एयरलाइन्स लञ्च गर्दैछन् । लण्डनमा बस्ने यी व्यक्तिको नाम काजी साफिकुर रहमान हो । उनी आफूलाई ‘हलाल रिचर्ड ब्रान्सन’ भन्न रुचाउँछन् ।
काजीको योजना भविष्यमा ब्रिटेनबाट यूएई, पाकिस्तान, बंगलादेशका लागि सेवा दिनु हो ।
साथै, यो एयरलाइन्समा तपाईंले हिजाब लगाएकी एयरहोस्टेज पनि देख्न सक्नुहुन्छ ।
यदि फिरनासले राम्रो गर्न सकेन भने यसले हाम्रो इज्जतमा दाग लाग्नेछ । हाम्रो समाजमा इज्जत नै सबैकुरा हो ।’
रहमान आफ्नो वास्तविक प्यासन एभिएसन भएको बताउँछन् । आफूले बाल्यवस्थादेखि नै यसबारे सपना देख्ने गरेको उनले बताए ।
उनले भने, ‘हामी निकै चाँडै हुर्कियौं । अहिले मेरो वास्तविक प्यासन बिस्तार गर्ने बेला आएको छ ।’
‘जब म विमान देख्छु तब म उत्साहित भइहाल्छु । यसले मलाई खुसी दिन्छ । यसप्रति मेरो लगाव पहिलो पटक विमान देख्दा नै थाहा पाएको थिएँ ।’
नेताले मन्दिरमा रक्सी बाँडेपछि ...
एजेन्सी । भारतीय सत्तारुढ दलका नेता नरेश अग्रवालले मन्दिरमा रक्सी बाँडेपछि हंगामा भएको छ ...
प्रतिदिन १७ जनासँग सहवास
काठमाडौंँ । उपत्यकामा सञ्चालित रात्रिकालीन मनोरञ्जन क्षेत्रमा कार्यरत एक महिला श्रमिकले ...
१४ वर्षदेखि कोमामा रहेकी महिलाले कसरी जन्माइन् बच्चा ?
काठमाडौं । १४ वर्षदेखि कोमामा रहेकी एक महिलाले बच्चा जन्माएको खुलासा भएको छ । अमेरिकाको ...
अनौठो संस्कारः जहाँ मान्छे मरेपछि शव गिद्धलाई खुवाईन्छ
छिमेकी तिब्बतको एउटा अनौठो संस्कारका बारेमा तपाईं हामीमध्ये कमैलाई थाहा होला । तिब्बतमा कुनै ...
यो दुनियाँमा एउटा यस्तो देश पनि छ जहाँ युवतीहरु आफ्नो जिउ मोटो बनाउनका लागि तछाड मछाड गर्दछन् ...
के जिसस डिसेम्बर २५ मै जन्मिएका थिए ?
एजेन्सी । क्रिसमसका अधिकांश परम्पराको मुल गैरक्रिश्चियन रहेको छ । क्रिसमस मनाउँदा प्रयोग ...